अमेरिका-रुस सम्झौताको सावधानीपूर्वक स्वागत - BBC News नेपाली
अमेरिका-रुस सम्झौताको सावधानीपूर्वक स्वागत
अमेरिका र रुसबीच सिरियामा युद्धविराम लागू गराउने विषयमा भएको सहमतिप्रति सिरियाका छिमेकी मुलुकले सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
सिरियासँगको सीमानाकामा हालै ट्यांकहरु तैनाथ गरेको टर्कीले सहमतिको स्वागत गरेको छ तर उसले शुरुबाट सहायता सामाग्री पुर्याइनुपर्ने बताएको छ।
राष्ट्रपति बशर अल असादको पक्ष लिएको सिरियाली युद्धको एउटा महत्वपूर्ण खेलाडी इरानले चाहिँ सहमतिबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
सिरिया समर्थक लेबननको एउटा पत्रिकाले सहमतिलाई सावधानीपूर्ण कदमको संज्ञा दिएको छ।
हामीले सम्झौताको विस्तृत विवरण र खासगरी त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रबारे थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। कसले युद्ध अन्त्य गराउनेछ? त्यो विश्वसनीय छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ र त्यसमा आधारित भएर काम गर्न सक्छौँ?
बोसामा कोदमानी, प्रवक्ता, सिरियाली विपक्षी समूह
सिरियाली विपक्षी समूह सिरियाली उच्च वार्ता समितिकी एकजना प्रवक्ता बोसामा कोदमानीले उक्त सम्झौताबाट केही आशा पलाएपनि त्यो कसरी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण आउन आवश्यक भएको बताइन्।
उनले भनिन्, “हामीले सम्झौताको विस्तृत विवरण र खासगरी त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रबारे थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। कसले युद्ध अन्त्य गराउनेछ? त्यो विश्वसनीय छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ र त्यसमा आधारित भएर काम गर्न सक्छौँ?”
यसअघि अमेरिका र रुसले सिरियामा जारी युद्ध अन्त्य गरेर राजनीतिक संक्रमण शुरु गर्ने योजनामा सहमति जनाएका थिए।
उक्त योजना अनुसार सिरियाली सरकारले विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रहरुमा सैन्य कारबाहीको अन्त्य गर्नेछ।
रुस र अमेरिकाले इस्लामिक स्टेट र अल नुस्रा भनिने विद्रोही समूहसँग लड्नका लागि एउटा संयुक्त केन्द्र स्थापना गर्नेछन्।
तस्वीर कपीराइट SAVE THE CHILDREN
अमेरिकी विदेशमन्त्री जन केरी र उनका रुसी समकक्षी सेरगेइ लाभ्रोभबीचको वार्तापछि युद्धविरामसम्बन्धी घोषणा भएको हो।
केरीले उक्त योजनामा आगामी सोमबारको सूर्यास्तदेखि सात दिनसम्मका लागि राष्ट्रव्यापी रुपमा युद्धविराम गरिने विषय पनि समेटिएको बताए।
आफ्ना योजना साकार पार्न सत्तामा रहेका र विपक्षी दुवै पक्षले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न आवश्यक रहेको केरीले जिनिभामा बताए।
यदि सिरिया सरकारले गम्भीरता देखाए उक्त योजना मान्नका लागि आफुहरु तयार रहेको विपक्षीहरुले संकेत गरेको पनि केरीले बताए।
रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले उक्त सम्झौतालाई महत्वपूर्ण र व्यावहारिक भन्दै मस्कोले सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई उक्त सम्झौता पालना गर्न भनिसकेको बताएका छन्।